Columbus, OH | Su'aalaha Haweenka Weydiiyaan | Caafimaadka PW
Dhiigbax intaad ku jirto Xakamaynta Dhalashada
Dhiig-bax ku saabsan xakameynta dhalmada ayaa dhici kara haddii aad ka booddo kaniin ama aad ka daahdo qaadashada kaniiniyada. Dhiigbax / dhibco ayaa sidoo kale dhici kara inta lagu jiro saddexda bilood ee 1aad ee bilaabista ama beddelka hab kasta oo xakameynta dhalmada hormoon ah. Haddii aad ka walwalsan tahay ama dhiig baxa / dhibicdu aysan fiicnayn, fadlan wac xafiiska inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si aad ballan u qabsato.
Ka hortagga uurka degdega ah
Haddii aad xiisaynayso ka hortagga uurka degdegga ah ama subaxa kiniinka ka dib, fadlan wac xafiiska inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si aad ballan u qabsato. Fadlan lagugula taliyo in uurka ka hortaga degdega ah loo baahan yahay in lagu qaado 72 saacadood gudahood galmada ka dibna sida ugu dhakhsaha badan ayaa u roon. Haddii aadan awoodin inaad xafiiska gasho 1-2 maalmood gudahood galmada, fadlan tag daryeel degdeg ah. Ka hortagga uurka degdega ah sidoo kale waxaa laga heli karaa miiska loogu talagalay bukaannada 18 iyo wixii ka weyn.
Rinjiga caadada aan caadiga ahayn
Xitaa qofka ugu caadiga ah wuxuu la kulmi karaa wareeg aan caadi ahayn halmar. Wareegga aan caadiga ahayn waxaa ku jiri kara laakiin aan ku xaddidnayn dhiigbaxa inta u dhexeysa wareegyada, wareegga ka culus / ka fudud midka caadiga ah, iyo / ama daahidda wareegga caadada. Waxaa jira sababo badan oo keena wareegga aan caadiga ahayn; inta badan uurka iyo diiqadda. Fadlan qaado baaritaanka uurka ee miiska lagaa iibsado haddii ay jirto fursad aad uur leedahay. Haddii imtixaanku wanaagsan yahay, fadlan wac xafiiska ballan. Haddii baaritaanka uu yahay mid taban oo aadan la kulmin wax calaamado kale ah (tusaale. Xanuun, lallabbo / matag), ka dib sug dhawr maalmood si aad u aragto inay caadi tahay iyo in kale. Haddii aad ka walwalsan tahay ama aysan jirin wax horumar ah, fadlan wac xafiiska inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si aad ballan u qabsato.
Cudurka Tract Urinary
Calaamadaha caadiga ah ee UTI waxay ku gubanayaan kaadida, soo noqnoqoshada, deg-degga, iyo / ama dhiigga kaadi. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah astaamahan, fadlan wac ballan midkood 'PWH', ama waxaad u baahan kartaa inaad u tagto daryeel degdeg ah si dhakhso leh loo arko haddii ay tahay saacadaha kadib. Waa in laguu arkaa ASAP haddii aad sidoo kale la kulanto dhabar xanuun iyo / ama qandho leh astaamaha kor ku xusan.
Caabuqa khamiirka waa caabuq ku dhaca xubinta taranka haweenka. Calaamadaha waxaa ka mid ah dheecaanka hoosta haweenka, cuncun iyo mararka qaarkood gubasho. Haddii aad isku aragto astaamahan saacadaha kadib, iskuday dukaanka 'Monistat' ama 'Gyne-Lotrimin'. Haddii astaamuhu aysan ka soo raynayn 2-3 maalmood, fadlan soo wac saacadaha shaqada ee caadiga ah si aad ballan u qabsato. Sidoo kale, haddii aad ka walwalsan tahay inaad qabto infekshinka xubinta taranka dumarka oo aadan u maleyneynin inuu yahay infekshanka khamiirka, fadlan wac xafiiska inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si ballan loo dhigo ama aad daryeelka ugu dhow ee ugu dhow